कमलबजारका कोरोना संक्रमितका गुनासोः काचो मटर-आलु खानुपर्ने, प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीले अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्छन् — onlinedabali.com
कमलबजारका कोरोना संक्रमितका गुनासोः काचो मटर-आलु खानुपर्ने, प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीले अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्छन्
डबली संवाददाता२०७७ असार २१ गते
अछाम । जिल्लामा कोरोना भाइरसका बिरामी थपिँदै गएका छन् । शुक्रबार थप २ सय ९ जनामा संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो भने शनिबार ३७ फेरि थपिएसँगै ५८७ जनामा कोरोना संक्रमण भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । संक्रमितमध्ये २४ जना कमलबजारमा रहेको कमलबाजार नगरपालिकाको आइसोलेसनमा छन् । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत खड्क विष्टका अनुसार आइसोलेसनमा २५ जना कोरोना पोजेटिभ मध्ये एक जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
कोरोना संक्रमितका अनुसार कमलबजारमा रहेको नगरपालिकाको आइसोसेलन सेन्टर अस्तव्यस्त र लथालिंगको अवस्थामा छ । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण भन्दा पनि झन् फैलिने भन्दै आइसोलेसनमा बसेकाहरु चिन्तित छन् । कतिपय आरडिटी पोजेटिभ भएर आइसोलेसनमा राखिएका छन्, कतिपयको पिसीआर रिपोर्ट आउन बाँकी छ भने धेरैको पिसीआरको लागि स्वाब समेत पठाइएको छैन । आइसोलेसनको व्यवस्थान निकै भद्रगोल अवस्थामा रहेको र थप कोरोना फैलिन डर लाग्न थालेको परीक्षण नगरिएकाहरु बताउँछन् । संक्रमण पुष्टि भएका र परीक्षण नगरिएकाहरुले एउटै ट्वाइलेट प्रयोग गर्न बाध्य छन् । खाना पनि गुणस्तरहिन भएको एक संक्रिमतले अनलाइन डबलीसँग भने ।
कमल (परिवर्तन गरिएका नाम) आइसोलेसनमा बसेको ४४ दिनपछि कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आयो । भारतबाट जेठको अन्तिममा घर आएका नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ का कमल १५ दिन क्वारेन्टिनमा बसे । आरडिटी परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि पिसीआर परीक्षणको लागि नगरपालिकाको कमलबजारमा रहेको आइसोलेनमा पठाइयो । असार १ गते कमलको स्वाब संकलन गरि पिसीआर परीक्षणको लागि पठाइयो । १९ दिनपछि असार १९ गते कमलले आफूलाई कोरोना पोजेटिभ भएको जानकारी पाए ।
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपनि आफूलाई अहिलेसम्म खोकी समेत नलागेको कमल बताउँछन् । बरु आइसोलेसनको बसाई, खानपानले पखला लाग्ने डर भएको उनले बताए । मेषले काचो केराउ र आलु खुवाउने भएकोले पखलाको डर लाग्ने गरेको बताए । “रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ भन्ने सुनियो तर हामीलाई त्यस्तो कुनै लक्षण छैन । जस्तो पहिले थियौं, अहिले पनि उस्तै छौं तर यहाँको बसाई र खानपानले संक्रमण झन फैलिने र पखाला लाग्ने डर छ” कमलले भने । उनले विहान काचो मटर, गुणस्तरहिन दाल, काचो आलुको तरकारी खुवाउने गरेको गुनासो गर्दै भने, “विहान काचो मटर खुवाउछन्, खानासँग काचो आलुको तरकारी र खानै नसकिने दाल खान बाध्य छौं ।”
प्राप्त मात्रामा तातोपानी समेत नदिने गरेको कमलले बताए । तताएको पानीमा चिसो पानी मिलाएर दिनमा एक जग मात्रै दिने गरेको उनले बताए । माग्दा मोज गर्न आएको हो र ? ठिकै खानु भन्ने जवाफ आउने गरेको कमलले गुनासो गरे । पटकपटक साबुन पानीले हात धुनु परैको कुरा ट्वाइलेट प्रयोग गर्ने बेला हात धुने साबुन नभएको उनले बताए । कोरोनासँग लड्न भनिएको तर व्यस्थापन लथालिंग भएको भन्दै आइसोलेसनमा भएकाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमितले तातोपानी, औषधि माग्दा सुरक्षामा बसेका प्रहरीले धम्की दिने गरेको गुनासो पनि संक्रमितको छ । “काचो मटर र आलुले पेट गडबड भएको र भान्सेलाई राम्रोसँग पकाउनुस्, तातोपानी माग्दा सुरक्षामा बसेका प्रहरीले गोली ठोक्ने आदेश छ भन्दै धम्की दिने गरेका छन् । चुपचाप नबसे जे पनि हुन सक्ने भन्ने प्रहरीले धम्की दिन्छ” कमलले भने । सामान्य कुरामा पनि प्रहरीले गोली ठोक्ने आदेश छ भन्दै धम्की दिने गरेको बताउँदै एक अर्का संक्रमित भन्छन्–“मेषमा खान खुवाउने जिम्मा लिएका व्यक्तिको मनपरी छ, अवस्थामा बुझ्न अरु कोही आउँदैनन्, को सँग कुरा राख्ने ? केही कुरा गरेपछि प्रहरीले गोली ठोक्ने आदेश छ भन्दै धम्की दिन्छ । हामी जघन्य अपराध गरेर यहाँ आएको जस्तो महशुस गरेका छौं ।” भान्सेलाई राम्ररी पकाएर दिनुस् भन्दा प्रहरीले उल्टै गुलेलीमा ढुंगा हालेर हान् भन्दै भान्सेलाई सिकाउने गरेको उनले बताए ।
त्यसैगरी उपचारको लागि भनेर खटिएका स्वास्थ्यकर्मीसँग औषधि माग्दा पनि संक्रमितले त्यस्तै व्यवहार भोग्दै आएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीले औषधि माग्दा मरेपछि खाल्डोमा पुरिदिउला के चिन्ता लिन्छस् भन्ने गरेको संक्रमितले बताएका छन् । “कोरोना पोजेटिभ भएपनि हामीलाई त्यस्तो कुनै लक्षण छैन । खानापान ठिक छैन, पेट दुख्छ, पखाला चल्छ, औषधि माग्दा स्वास्थ्य हेर्ने जिम्मा लिएका स्वास्थ्यकर्मीले खाल्डोमा पुरिदिउला भन्छन्” संक्रमित कमलले बताए । स्वास्थ्यकर्मीहरुले अमानवीय व्यवहार गरेको बताए ।
नगरप्रमुख ओमप्रकाश विष्ट एकदुई पटक आएर विकास खर्च कटाएर तपाईँहरुको लागि खर्च गरिएको छ भनेको तर यहाँ आफूले त्यो अनुभूति नगरेको संक्रमितहरु बताउँछन् ।
कार्यकारी प्रमुख विष्टले आफूहरुले साधान स्रोतले भ्याएसम्मको गरेको दाबी गरे । कोरोना संक्रमितले गुनासो गर्नु स्वाभाविकै भएको बताउँदै उनले खाना र बस्ने सबै व्यवस्था गरेको बताउँदै विष्टले भने, “कुनै दिन केही समस्या भयो होला, अपुग पनि भयो होला तर हामीले सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।”